Traffic Safety | socod Asheeraah
You are here: Home › Entries tagged with "交通安全"
Maka mid ah Asheeraah Sumida River、Bright oo la soo saaray "beerta" sida jawiga。Laakiin Metropolitan waxaa socda oo kaliya ka danbeeya、Waxa la yaab leh xasilloon xitaa。Tani waa mid ka mid ah sifooyinka qofka ilmaha masuulka ka dhicis "Komakame" waa、Gamera Ppoku haddii ay jiraan dhegaha iyo faan、Laakiin inoo darana ah cayaar waayo,、Pretty jir u muuqataa? dheeraad ah、Sidoo kale hore ee Yomiuri Shimbun ee torii in u taagan in dhinaca sare caasimada taalada "qubo" Rashiki ... Tani waa ka badan jir u muuqataa? sidaas oo kale、Maxaad qoolley? Maxaa yeelay, Asheeraah biyaha? ...
Waxa uu noqonayaa mid ka hor wax yar ka hooseeya torii ka mid ah、Ama in yar oo koror ku torii labaad ... in ee bidix iyo midig、Oo taallo dhagax damacsan yahay Zurazura、Wax yar ka faraxsan。Ama maxaa yeelay, waa Year New, sida ku、Door hoolka cibaadada sidoo kale waxa ay sidoo kale albaabka Asheeraah dhisay furay、Hey qurux badan。Weli muuqaalka duubay of Asheeraah la dareemay bartey nostalgic、Dhafan ee kulul u ...